Dan iyo Xeelad
Ma danbaa misa waa xeelad dowladnimada soo socota? Odayaasha qabiilka oo dhaqanka u adeegsanaya siyaasad ay dowladnimada ku helaan. Wadaadada diinta oo qaab siyaasadeed u isticmaalaya diinta si ay ugu gaaraan danahooda siyaasadeed. Hogaamiyeyaasha bulshada rayidka oo meherada musuqmaasuqa u cuskanaya siyaasadii ay ku gaari lahayeen dowladnimada. Saraakiisha dagaalka oo doonaya siyaasad ku dhisan xoog iney hankooda dowladnimo ku gaaraan iyo wakiilada shisheeyaha ama bulshada caalamka oo maleegaya tab xeeladeed oo ay ku dhaqan geliyaan dowlad u adeegeysa danaha shisheeyaha. Ummadda Soomaaliyeed dowladda ay ka sugayaan wadatashiga odayaasha aragtideedu tahay qeybsiga dumista qaranka ma u danbaa mise waa u xeelad.
Waxaa ii muuqda halgankii xoriyada oo dib loogu noqday. Waxaa dalal badan oo xoog leh ka dhaadhacsan in dadka soomaalida aan si wanaagsan loo carbin xiligii gumeysiga, aqoonsi dowladnimana la siiyey iyagoon lahayn aqoonta ah sida loogu dhaqmo dowlad qarameed. Aduunyadu waxey aragtaa dalkii Soomaaliyeed oo aduunyada inteedii kale ka xarga goostay, oo ay gacanta ka soo taagteen gumeysigii toosna iyo kii dadbanaa labaduba. Waxaan shaki lahayn in dalalka cududa weyn ay qorsheynayaan shax wejiyo badan xambaarsan. Tusaale ahaan, Mareykanku wuxuu qorshihiisa siyaasadeed ee kala duwanaa ergo ahaan u adeegsaday dowlada Masar, Ethiopia iyo ugu dambeystii Uganda. Muxuu sameyn doona Mareykanku haddii uu fashilmo isku daygiisa u dambeeya ee uu sida dadban u adeegsanayo wadamada kale? Waxaan qarsooneyn in Mareykanku damacsan yahay inuu si qaawan u soo farageliyo dhulka Soomaalida. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsooneyn in Mareykanku xeelad kastaba ha u adeegsadee uusan dan iyo helo midna uusan ka lahyn diinta, dadka, dhaqanka iyo siyaasada hoose ee Soomaalida.
Dalalka Yurub oo adeegsanaya diblomaasiyada Kenya, Djibouti iyo Libia haddii ay waxba ka soo bixi waayaan dadaalkooda maxey iyaguna sameyn? Waxaan dood lahayn in arrinta Soomaalida dib loogu celin doono UNka oo qiil halkaas uu ka soo baxo lagu xalaaleysanayo in dalka Soomaaliyeed lagu kor dego.
Dowladihii ka jirey Soomaaliya ma aysan ahayn kuwo ka turjumayey xuquuqda dadku ka sugayeen dowlad qaran. In kasto dadku sabool wada ahaa, haddana wixii dalka ama dowlada soo gala ummaddu uma wada sineyn. Maandeeq dadbaa maalayey dadna waa lagu dul maalayey, oo weliba ku dulnoolaashaha dulmi loogu darayey. Dad badan ayey dantu biday iney qabiilka u isticmaalaan iney ku dumiyaan wixii lagu dul dhisay. Dad badan ayaa maciin bidey iney diinta u adeegsadaan wadaado shisheeye oo ay ka amar qaataan si ay dariiqadooda uga sareysiin lahayeen kuwa kale. Qabyaaladii oo aan lahyn cadaalad, dhaqankii wanaagsanaa iyo diintiina u rogtey qeyb ka mida siyaasadeeda ayey dadkii u noqdeen magan. Siyaasada qabiilkuna waxey noqotay diinta dalka, dhaqanka dadka iyo siyaasada qaranka.
Dalka waxaa la kufay waa dhaqankeeda xun oo qaabka siyaasadeed loogu dhaqmayo, wuxuuna la kici waayey waa xeelada shisheeyaha aan ehelka u ahayn oo u adeegsanaya madaxweynayaasha siyaasadaas wax ku tacbada. Waxaad moodaa in wadatashiga lagu dhisayo dowlada Soomaaliyeed ay doorasho weyn leeyihiin oo keliya qabqablayaasha dagaalka,diinta dhaqanka iyo dalaaliinta shisheeyaha. Marba haddii shisheeyihii iyo odayaashii aan u heysaney sokeeyaha ay isku dan yihiin iyaguna ay yihiin kuwa dowlada wada dhisanaya, taasi ma ahan dan iyo xeelad Soomaaliyeed mid ku timid ama laga sugayo cadaalad inay ummada ugu sinto xuquuqdeeda. Odayaasha isku yimid haddii ay isku cafiyaan dhibaatada dhexdoodaa oo ay ka heshiiyaan, yaa ka cafin tii ay ka galeen ummadda xalna aysan iyagu hadda u ahayn. Aad bay u fiicnaan lahayd haddii ay garan lahayeen iney dhamaantood isaga tagaan madaxtinimada ay sheeganayaan, ciddii siyaasad dan ka lehna ay ku kala biiraan xisbiyo siyaasadeed oo madaxdooda la kala dooran karo. Haddii la waayo qaab ay dadku si toosa wax ugu doortaan, oday duub cad oo sokeeyaa iyo shisheeye dulcad dowladnimadooda waxba iskuma doorinayaan ummadda Soomaaliyeed.
Arrinka toosan ee maanta ku haboon Soomaalida waa ineysan maskaxdooda gelin dareen ay la kacaan oo ay ku kala raacaan dad aan waxba isdhaamin. Si looga badbaado in dib loogu noqdo in mar labaad la iska xoreeyo shisheeye dalka duulaan ku qabsada, waxaa furan fursada ah in marka hore dadku iska xoreeyo odayaasha ay siyaasadoodii ku mariin habaabeen, kana dalbadaan dadka ay matelayaan iney ka hor wareegaan si fursad loogu helo tartan iyo doorasho loo galo siyaasada, dadkuna ay ku xushaan siyaasiyiin cusub oo wadatashi ka geli kara dhismo dowlad Soomaaliyeed. Nin walba waa inuu yiraahdaa cida mateleysa waad qaldan tahay, intii gadaal dambe laga shaleyn lahaa mar dalkii uu gacanta u galay dal cudud weyn. Looma baahna tanaasulka siyaasiyiintaas in la sugo, taas oo aan la fileyn inay xagooda ka timaado. Dadku waa iney ishubeyaan iskana kaashadaan ridida madaxda ismagacawday ama siyaasadoodu mira dhaliweysey. Isbedel ku yimaada dadka oo ay iskood ugu soo dooranayaan madax cusub ayaa ah xalka keliya oo looga hortegi karo siyaasada lagu daaley oo ay odayaasha isaga dabawareeganayaan iyo duulaanka shisheeyaha oo iyaga dabajooga.